DC12V / 24V Slim mitondra fiara 100W 4.2A  Contact Now
Led driver plastika Triac dimmable Led mpamily  Contact Now
Volam-baravarankely mivelatra 347V tsipika mitondra mpamily (slim)  Contact Now
Làlan-jiro milina hazavana niisa Linear nitarika mpamily 347Vac  Contact Now
Ny mpamily làlam-pandrafetana tsara ho an'ny Liminuaires 30W  Contact Now
Ny mpamily làlà LED 30W 50W 80W  Contact Now
Ultra slim dia nitondra ny mpamily Linear Linear  Contact Now
Mpanara-peo Ultra Slim 30W tsy tapaka ankehitriny  Contact Now
Boaty junction nitarika ny hazavana tontolon'ny lampihazo nitarika mpamily  Contact Now
DC12V / 24V Slim mitondra fiara 100W 4.2A
famaritana Mombamomba ny vokatra Product Details Mihena, ary azo esorina （0-100%） Fehintsoratra rehetra tsy misy flicker, Triple dimming 0-10V / PWM / PXDALI Mikasika ny fiarovana ny volonta, fiarovana ny fizaran-tany fohy, fiarovana fiarovana Azo mety amin'ny tontolo mando Vokatra P voamarina Class 5year warranty...
Fahold Electronic Driver LED mpamily : Famoahana fantsona tokana, famoahana haavo ankehitriny azo nofidian'i DIP SW Tadiavo 0-10V amin'ny alàlan'ny famantarana dimming, fambara Pasifika na mavitrika. Ny fantsom-bolan'ny fidirana isan-karazany 100VAC ~ 277VAC Fahombiazana ambony hatramin'ny 88%...
Mombamomba ny vokatra Fahold Electronic Limited Drivers Features : Famoahana fantsona tokana, famoahana haavo ankehitriny azo nofidian'i DIP SW Manohana famantarana famantarana dimming analogVo, Pasifika na mavitrika. Ny fantsom-bolan'ny fidirana isan-karazany 100VAC ~ 277VAC Fahombiazana ambony...
Led driver plastika Triac dimmable Led mpamily
Mombamomba ny vokatra Fahold Electronic Limited Drivers Features : Famoahana fantsona tokana, famoahana haavo ankehitriny azo nofidian'i DIP SW Tohanana ny fanamafisam-peo manaitra, Pasifika na mavitrika. Ny elanelana fidirana isan-karazany180VAC ~ 240VAC Fahombiazana ambony hatramin'ny 84% Miasa amina PFC...
Volam-baravarankely mivelatra 347V tsipika mitondra mpamily (slim)
Famoahana fantsona tokana, famoahana haavo ankehitriny azo nofidian'i DIP SW Tariho Dali / 0-10V famantarana dimming analog, Pasifika na mavitrika famantarana. Ny fantsom-bolan'ny fidirana isan-karazany 120VAC ~ 347VAC Fahombiazana ambony hatramin'ny 88% Miasa amina PFC mavitrika Famokarana 100% rehefa tsy...
Làlan-jiro milina hazavana niisa Linear nitarika mpamily 347Vac
Ny mpamily làlam-pandrafetana tsara ho an'ny Liminuaires 30W
Mombamomba ny vokatra Fahold Electronic Limited Drivers Features : Famoahana fantsona tokana, famoahana haavo ankehitriny azo nofidian'i DIP SW Tariho Dali / 0-10V famantarana dimming analog, Pasifika na mavitrika famantarana. Ny fantsom-bolan'ny fidirana isan-karazany 100 (120) VAC ~ 277VAC Fahombiazana...
Ny mpamily làlà LED 30W 50W 80W
Famoahana fantsona tokana, famoahana haavo ankehitriny azo nofidian'i DIP SW Tariho Dali / 0-10V famantarana dimming analog, Pasifika na mavitrika famantarana. Ny fantsom-bolan'ny fidirana isan-karazany 120VAC ~ 277VAC Fahombiazana ambony hatramin'ny 88% Miasa amina PFC mavitrika Famokarana 100% rehefa tsy...
Famoahana fantsona tokana, famoahana haavo ankehitriny azo nofidian'i DIP SW Tohanana ny famantarana famantarana DimV analog dimen, Passive na mavitrika famantarana. Ny fantsom-bolan'ny fidirana isan-karazany 100VAC ~ 277VAC Fahombiazana ambony hatramin'ny 88% Miasa amina PFC mavitrika Famokarana 100%...
Ultra slim dia nitondra ny mpamily Linear Linear
Mombamomba ny vokatra Fahold Electronic Limited Drivers Features : Famoahana fantsona tokana, famoahana haavo ankehitriny azo nofidian'i DIP SW Tariho Dali / 0-10V famantarana dimming analog, Pasifika na mavitrika famantarana. Ny fantsom-bolan'ny fidirana isan-karazany 100VAC ~ 277VAC Fahombiazana ambony...
Mpanara-peo Ultra Slim 30W tsy tapaka ankehitriny
Boaty junction nitarika ny hazavana tontolon'ny lampihazo nitarika mpamily
Mombamomba ny vokatra Ny mpamily efa simba tsy tapaka Fahold Electronic Limited Drivers Features : Famoahana fantsona tokana, famoahana haavo ankehitriny azo nofidian'i DIP SW Manohana famantarana famantarana dimming analogVo, Pasifika na mavitrika. Ny fantsom-bolan'ny fidirana isan-karazany 100VAC ~ 277VAC...
Ny mpamily làlona LED DC 24V mpamily LED Flicker Free Output Mombamomba ny vokatra Ireo mpamily LED Fahold dia mamaha ny olana mifanandrify eo amin'ny jiro fluorescent sy ny jiro LED. Ampiasaina be dia be miaraka amin'ny karazana dimming system system izy ireo mba hifehezana ny jiro LED an'ny jiro, LED...
Mombamomba ny vokatra Ny andiany HN42W-02 dia mpamily LED 60W ho an'ny Panel LED , jiro LED amin'ny valindrihana, LED Downlight miaraka amin'ny fanamarinana UL, izay miasa amin'ny 100VAC mankany amin'ny 277VAC fidirana miaraka amin'ny mpamily herinaratra. ity modely ity dia misy tranga metaly,...
Mombamomba ny vokatra Ireo mpamily LED Fahold dia mamaha ny olana mifanandrify eo amin'ny jiro fluorescent sy ny jiro LED. Ampiasaina be dia be miaraka amin'ny karazana dimming system system izy ireo mba hifehezana ny jiro LED an'ny jiro, LED downlight, jiro LED, jiro LED, fanamainty LED, jiro mandrehitra...
Mombamomba ny vokatra HS65W-01 , natao manokana ho an'ny fampiasa an-trano sy fampiharana ara-barotra (Jiro Tri-porofo), hampandeha ny fanamboarana jiro Tri-porofo ankapobeny. Flicker free 0-10V dimming LED Driver 65W 1500mA, miaraka amin'ny fakan-tsary miaraka amin'ny 65W, TUV, CE mifatotra, famokarana...
3 taona an-tariby 65W 1500mA Fiara mpitatitra LED ankehitriny ho an'ny jiro maivana Mombamomba ny vokatra Ny mpamily LED avy amin'i Fahold dia mamaha ny olana mifanaraka amin'ny jiro manjelatra sy ny jiro LED tena mahomby. Ampiasaina amin'ny karazam-pamokarana isan-karazany izy ireo mba hifehezana ny...
Mombamomba ny vokatra Leader LED Light Fixture 500mA led led light linear 20W Mombamomba ny vokatra: Ny mpamily LED avy amin'i Fahold dia mamaha ny olana mifanaraka amin'ny jiro manjelatra sy ny jiro LED tena mahomby. Ampiasaina amin'ny karazam-pamokarana isan-karazany izy ireo mba hifehezana ny...
Mombamomba ny vokatra FD-160H-038, natao manokana ho an'ny jiro LED Street, tariby mitarika labozia, mba hampiasana ny Solosaina Outdoor Outdoor. IP67 mitambolimbolina, miaraka amin'ny 0-10V, PWM, RX mamay, mandalo ny UL Certiication amin'ny 5years warranty.input 100-277V, ny tolotra avo indrindra dia...
Mombamomba ny vokatra FD-160H-038 , natao manokana ho an'ny jiro LED Street, tariby mitarika labozia , mba hampiasana ny Solosaina Outdoor Outdoor. IP67 mitambolimbolina, miaraka amin'ny 0-10V, PWM, RX mamay, mandalo ny UL Certiication amin'ny 5years warranty.input 100-277V, ny tolotra avo indrindra dia...
36W 250-1200mA Dimmable LED Driver  Contact Now
Constant Current LED Power Light Fixture 50W  Contact Now
LED Driver LED Panel Linear Driver LED Downlight Driver LED Linear Driver Tondroin'ny LED mandeha amin'ny rano Fiara mpitatitra DC12 / 24V Hlg LED Driver LED Buld Driver